WinCom Solutions : Consulting, Training, Outsourcing, Field Marketing in Myanmar
"GROW Together,WIN Together"
Consulting Impact starts with insight
Outsourcing Focus on what matters
Field Marketing Connecting brands to consumers
ကျွန်ပ်တို့အကြောင်း အတိုင်ပင်ခံ အကြံပေးခြင်း လက်လွှဲဝန်ဆောင်ခြင်း ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ Blog ဆက်သွယ်ရန်
2015 မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Wincom သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စီးပွားရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များတွင် ကျင်လည်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးချိန်မှ စတင်၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း (၁၀၀) ကျော်ကို အောင်မြင်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Trust Venture Partners သည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြည့်စုံစွာရရှိနိုင်သော လွတ်လပ်သည့်အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်း - နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာပြည်တွင်း အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုသဘာဝနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အလေ့အထများကို ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးကာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကြံပေး မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ CEO များနှင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကြံပေးဖော် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက် ဖြစ်ခြင်း၊
တခြားလုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်းများထက် အရေအတွက်များသော ပရောဂျက်များကို မြန်မာပြည်တွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံရှိခြင်း၊
ရန်ကုန်အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များကို လွှးကို လွှမ်းခြုံကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။
== Impact starts with insight ==
ကျွနု်ပ်တို့ WinCom သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် ကူညီပါဝင်အားဖြည့်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ကျွနု်ပ်တို့သည် မရေရာမှုများနှင့် တစ်ရှိန်ထိုးပြောင်းလဲနေသော မြန်မာ့စီးပွားရေးလောက အခြေအနေကို နားလည်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များကို အောင်မြင်မှုရရှိပြီး ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိစေရန်အတွက် လက်တွဲ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့၏ ထွန်းသစ်စဈေးကွက်နှင့်အညီ လိုက်လျော်ညီထွေစွာ ချဉ်းကပ်တတ်သော အတွေ့အကြုံကောင်းများသည် ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ လိုအပ်ချက်တို့ကို ပြည့်ဝစေပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ တိုးတက်စေရန် လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း
မိတ်တွေတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ ခြုံငုံ၍ အကဲဖြတ်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေး၍ ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ထိရောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစည်းပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
ဝန်ထမ်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုင်ရှင်/အုပ်ချုပ်သူများ၏ ရည်မှန်းချက်တို့နှင့် ထပ်တူကျစေရေး ချိန်ညှိပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ လုပ်ငန်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီး နောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ/လုပ်ငန်းစဉ်များ မြန်ဆန် လွယ်ကူစေရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ ကုမ္ပဏီရှိ ဌာနအသီးသီးတို့အတွက် စံပြုဖွယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လုပ်ငန်းစဉ်စံသတ်မှတ်ချက်များကို ရေးဆွဲပြင်ဆင်ပြီး အကောင်အထည်ပေါ်စေရေးအတွက် ကူညီ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အညီ အကျိုးတူဖက်စပ်လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စေရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ် ကဏ္ဍအားလုံးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သုံးသပ်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ အနာဂတ်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်စေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာအကြံပြုချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။
တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲနေသော မြန်မာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များအတွက် ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စ၊လယ်၊ဆုံး အဆင်ပြေစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ထို့အပြင် အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရေးအတွက် အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း၊ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင်လည်း ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ မြင့်တင်ခြင်း
အဓိကကျသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တိုးတက်စေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ပိုမိုစနစ်ကျစေရန်အတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မူဝါဒများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်စနစ် (PMS) ချမှတ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်များ ပြုစုခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း/ ဖောက်သည်ရွေးချယ်ခြင်း
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့သည် နည်းပညာကို အသုံးပြုမှု များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်၍ မှန်ကန်သော နည်းပညာများ ရွေးချယ်ရေးအတွက် အကူအညီပေးပြီး စိန်ခေါ်မှုတို့ကိုကျော်လွှားစေရေးနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတို့ကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတွင် ကူညီပေးပါသည်။
အလုပ်ရှင်များသည် ဝန်ထမ်းအလွှာအသီးသီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြင့်ရေးအတွက် သင့်တော်သော အရည်အချင်းမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော သင်တန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များဖြင့် ဝန်ထမ်းအလွှာအသီးသီး၏ အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် မိတ်ဆွေတို့နှင့် အတူလက်တွဲ၍ လုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကို အတူလုပ်ကိုင်ပြီး အကြံပြုချက်ကောင်းများကို ပေးအပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရေရှည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ ရရှိရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသိပညာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေနိုင်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
စီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အကြံဉာဏ်ကောင်းများအသုံးပြု၍ လိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တို့နှင့် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
လက်လွှဲဆောင်ရွက်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု(Focus on what matters)
== Focus on what matters ==
မြန်မာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်သည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှု မရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ကြုံလာမည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဈေးကွက်အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာမှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်မည့် စီးပွားရေးအစီအမံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကောင်းမွန်ခိုင်မာအောင်ဖန်တီးရာတွင် အာရုံစူးစိုက်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
WinCom သည် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့အားသန်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသက်သက်ကိုသာ အာရုံစူးစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရေးအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ စိတ်ချယုံကြည်ရသော လက်လွှဲတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၀၁ | ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ယာယီ၊ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများ (သို့) စီမံကိန်းပေါ် မူတည်၍ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၀၃ | လစာတွက်ချက်စီမံခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
လစဉ်တိုင်း လစာတွက်ချက်ခြင်း၊ ပေးအပ်ခြင်း အစရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်တတ်သည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များသည် သတိမမူမိတတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုး နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဘဏ်ဖြင့် ချိတ်ဆက် ငွေလွှဲခြင်း
၀၅ | ဝန်ထမ်းခံစားခွင့်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဝန်ထမ်းလုပ်ခလစာအပြင် အခြားသော အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း အချိန်မီပေးအပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကော်မရှင်နှင့် အပိုဆုကြေးများ ပေးခြင်း
စိုက်ငွေများ/ အသုံးစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးချေခြင်း
၀၂ | ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်အပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
ဝန်ထမ်းအများအပြားလိုအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို ငွေကြေးအကုန်အကျသက်သာစွာဖြင့် စီမံကိန်းကာလအတွင်း ခန့်အပ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၀၄ | ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းမှုများ
ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော အလုပ်သမား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဆောင်ရန် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်မဆို အရေးကြီးပါသည်။
ဝင်ငွေခွန်နှင့် လူမှုဖူလှုံရေး ကိစ္စရပ်များ
အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ
၀၆ | ဝန်ထမ်းတို့သိလိုသည်များကို ဖြေကြားခြင်း
မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၏ ဝန်ထမ်းများ သိရှိလိုသော အရာများကို ဖြေကြားပေးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ထင်မြင်ယူဆချက်များကို နားထောင်ပေးခြင်းဖြင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးတို့ကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို့ စီးပွားရေး တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွင် ပိုမို၍ အာရုံစိုက်နိုင်ခြင်း
ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသောအလုပ်များမှ တဆင့် စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် အချိန်ပိုမိုရရှိစေခြင်း
မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် အကောင်းဆုံးလုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို မျှဝေပေးနိုင်ခြင်း
မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အကောင်းဆုံး ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
== Connecting brand to consumers ==
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်လိုအားနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပမာဏ မြင့်တက်လာခြင်းကို ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများသည် အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုမြင့်မားလာပြီး မိမိကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကို သစ္စာရှိစွာ ဝယ်ယူစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေရသည်ကို မြင်တွေ့လာရပါသည်။
မိမိကုန်ပစ္စည်းကို စားသုံးသူတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီး ဈေးကွက်တွင် လွှမ်းမိုးလိုသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းရှင်မဆို ကျွနု်ပ်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်အရောင်းဝန်ထမ်းများက မြန်မာနိူင်ငံအတွင်းရှိ စူပါမားကတ်ကဲ့သို့သော ခေတ်မီဈေးကြီးများ၊ ကိုယ်တိုင်ယူငွေရှင်းစနစ်ကျင့်သုံးသော မီနီမားကတ်များနှင့် စတိုးဆိုင်များအပြင် စားသောက်ဆိုင်များ ဈေးဆိုင်များ၌ပါ နေရာအစုံတွင် မိတ်ဆွေတို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို စားသုံးသူတို့နှင့် ပိုမိုထိတွေ့နိုင်စေရေးအတွက် မိတ်ဆက်ရောင်းချကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝန်ထမ်းများကို ရှာဖွေခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဝန်ထမ်းများ / ကုန်ပစ္စည်းများခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် ပစ္စည်းနမူနာများ ဝေငှခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ထိုးဖောက်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးရေး ဝန်ထမ်းများ
လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ - အလုပ်ရှင်၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ မိတ်ဆွေတို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို စားသုံးသူတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေသော ဝန်ဆောင်မှုတို့ကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြခြင်း/ ထင်မြင်ချက်များ မျှဝေခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာပွဲများမှ ရရှိလာသော စားသုံးသူများ၏ ထင်မြင်ချက်များကို လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြပေးသည်။
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကုန်ပစ္စည်း ကြော်ငြာပွဲများ အောင်မြင်စေရေးအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိထားပါသည်။
အလုပ်ရှင်များ၏ ကုန်ပစ္စည်း ကြော်ငြာပွဲများ စီစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ကြာချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုက်တန်သော ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဖြင့် ထိရောက်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံများ ပေါ်ထွက်လာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
TTAS Co., Ltd
We are confident to recommend the services of WinCom Solutions. We have been using WinCom’s business support service and have always been completely satisfied with their performance and customer services.
Vice Chairman (PSWN Company Limited)
We would highly recommend WinCom Solutions. They provided the solutions we needed and followed up to make sure our operations were running smoothly.
Executive Director (MGL Express) Magnate Group Logistics Company Limited
We have been using WinCom’s
business support services and are very much satisfied with their performance, attitude and customer services.
An International Development Cooperation Agency
We have been using WinCom Solutions services in the past years in the recruitment and management of personnel and we are fully satisfied of the services provided and their professionalism. Therefore we recommend WinCom Solutions asareliable company in business support.
Business Development Director, Victory Myanmar Group
WinCom has been consulting for Victory Myanmar Group over the past year with great outcomes. WinCom has been excellent in identifying issues, coming up with solutions and solving problems. Furthermore, they have been excellent at tracking newly implemented structures or procedures to ensure that tasks are executed as planned which is rare in this industry. We wholeheartedly recommend WinCom’s services.
POLL | Challenges in monthly payroll processing faced by organization
POLL |The best way to manage payroll in 2021
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လည်ပတ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းသည် ကူးစက်ရောဂါ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် ပို၍အရေးကြီးသော အရာဖြစ်ပါသည်။ ဤကပ်ရောဂါ သည် စားသုံးသူများ၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ရှိနေသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိစ္စအတွက်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သောအချိန်ပဲဖြစ်သည့်အပြင်ကျွန်ပ်တို့ပြောနိုင်တာကတော့ ပြန်လည်ချိန်ညှိ သော နည်းလမ်းအသစ်များဖြင့် စားသုံးသူဖောက်သည်များကို ရရှိအောင်လုပ်ခြင်း၊ စားသုံးသူဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများနှင့် စားသုံးသူဖောက်သည်များကို...
အမှတ် ၄၃/၄၄၊ ကမ်းနားလမ်း၊ MMM အဆောက်အဦး ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။
(+၉၅) ၉ ၂၆၂၇၈၈၈၀၀